Tartamo Isboorti iyo caado-dhaqameedka Istunka oo shalay ka dhacay degmada Afgooye +Sawirro – idalenews.com
Tartamo Isboorti iyo caado-dhaqameedka Istunka oo shalay ka dhacay degmada Afgooye +Sawirro
Tartamo Isboorti oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen Ururka Dhalinyarada ee SYL II iyo maamulka Arrimaha bulshada ee degmada Afgooye ayaa shalay lagu soo gab gabeeyay degmada Afgooye, iyadoo tartankan uu isugu jiray ciyaaro K/cagta ah, dheri jebis iyo caado dhaqameedka loo yaqaano Istunka.
Tartankan ayaa ahaa mid qeyb ka ahaa is dhex galka bulshada, waxaana qaban qaabiyeyaasha ay ugu tala galeen sidii ay ugu dhiira gelin lahaayeen jiilka soo koraya ciyaaraha caada dhaqameedyada ee ay caanka ku aheyd degmada Afgooye.
Mas’uuliyiin ka socotay Maamulka Gobolka Sh/Hoose iyo Mas’uuliyiinta maamulka degmada ayaa ka qeyb galay Tartan ciyaareedkan, kaasoo lagu bixiyay abaal marino loogu tala galay kooxihii ku guuleystay ciyaaraha kala duwanaa ee lagu soo bandhigay fagaaraha degmada Afgooye.
Gudoomiyaha degmada Afgooye C/laahi Cabdi Iideey ayaa sheegay in tartamada ceynkan oo kale ay ka qeyb qaadanayaan is dhex galka bulshada iyo nabada, waxaana uu tilmaamay in ciyaarayahan ay horu dhac u yihiin caado dhaqameedka Istunka ee dhowaan ka dhici doono degmada Afgooye.
Sidoo kale gudoomiyaha dhinaca Isboortiga iyo dhalinyarada degmada Afgooye Mr Anwar ayaa sheegay in tartamada nuucan oo kale ay ka qeyb qaadan karaan isku xirka dhalinyarada degmada.
Ugu dambeyn ayaa waxaa fagaaraha degmada Afgooye ka dhacay ciyaaro istun ah oo la arkayay dhalinyaro ka qeyb qaadaneysay oo Ulo isu watay, dheri jebin iyo ciyaar kubada cagta ah oo kooxdii ku guuleysatay la gudoonsiiyay Koob.
Wasiirka arrimaha gudaha oo ku amaanay ciidamada dowlada iyo kuwa Jabuuti sida wanaagsan oo ay wax uga qabteen nabadgelyada Beledweyn
Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka oo kulamo la leh qeybaha bulshada ee magaalada Kismaayo